ကိုယျ့ကိုယျကိုယျသာ ခဈြပါ – Shinyoon
နညျးနညျးလေး အတ်တဆနျ​ကောငျး ဆနျနိုငျပါတယျ ဒါပမေယျ့ ဘယျသူမြား ငါ့ကို နားလညျပေးနိုငျမလဲဆိုတာထကျစာ အမြားကွီး ပိုကောငျးပါတယျ လဲကသြှားတဲ့အခါ ဘယျသူကမြား ငါ့ကို ဆှဲထူမပေးလိမျ့မယျလို့ တှေးနတောထကျစာရငျ ကိုယျကိုယျတိုငျပွနျပွီး ထရတဲ့အခြိနျတှေ ပိုမြားပါတယျ
တဈစုံ​တဈယောကျကွောငျ့ နာကငျြလာရတဲ့အခါ ဘယျသူကမြား ဖေးမလိမျ့မလဲလို့ ဆကျပွီးတှေးနတေုနျးလာ ကိုယျ့ပြျောရှငျမှုက ကိုယျနဲ့ပဲ ဆိုငျပါတယျ ကိုယျပြျောခငျြ ပြျောအောငျနတေတျဖို့ပဲလိုတာ ဒုက်ခရောကျတဲ့အခါ ဘယျသူ့ကိုမှ မတနဲ့ ကိုယျ့လမျးကိုယျလြှောကျမှပဲ ကိုယျ့ပနျးတိုငျကိုယျရောကျတာပါ အရာရာမှာ ကိုယျပဲ လိုပါတယျ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျသာ ပိုပွီး ခဈြပါ
အတ်တကွီးပါလို့ ​ဆိုတာလိုတာမြိုးမဟုတျပဲ တခွားတဈယောကျအတှကျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ မနာကငျြစခေငျြတာပါ ကိုယျ့အတှေးနဲ့ကိုယျ အအိပျပကျြ အစားပကျြတာတှကေ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ နှိပျစကျရာကတြယျလေ ကိုယျ့ထကျ တဈစုံတဈယောကျကို ပိုခဈြလိုကျတဲ့အခါ အဲ့ဒီလူကွောငျ့ပဲ ကိုယျ့မှာ နာကငျြရပါတယျ ငါ့အတှကျ ငါ့အတှကျ ကွီးပဲဆိုတာမြိုးက အတ်တကွီးတာကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ခဈြတာ မဟုတျဘူး
တကယျလို့ ကိုယျကိုယျကိုယျသာ အမှနျတကယျခဈြမွတျနိုးတတျရငျ ကိုယျ့မိသားစု ကိုယျပတျဝနျးကငျြ အရာအားလုံးကို ခဈြတတျလာလိမျ့မယျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ထိခိုကျအောငျ မလုပျတော့သလို ကိုယျ့မိသားစုကိုလဲ မထိခိုကျစခေငျြကွဘူးလေ
လောကမှာလေ . . . .ကိုယျ့လောကျ ကိုယျ့အပျေါနားလညျအနိုငျဆုံးဆိုလို့ ဒီကမ်ဘာမှာ ကိုယျတဈယောကျတညျးပဲရှိတယျ ဒါ့ကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျသာ ခဈြပါ ။
နည်းနည်းလေး အတ္တဆန်​ကောင်း ဆန်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်သူများ ငါ့ကို နားလည်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာထက်စာ အများကြီး ပိုကောင်းပါတယ် လဲကျသွားတဲ့အခါ ဘယ်သူကများ ငါ့ကို ဆွဲထူမပေးလိမ့်မယ်လို့ တွေးနေတာထက်စာရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီး ထရတဲ့အချိန်တွေ ပိုများပါတယ်
တစ်စုံ​တစ်ယောက်ကြောင့် နာကျင်လာရတဲ့အခါ ဘယ်သူကများ ဖေးမလိမ့်မလဲလို့ ဆက်ပြီးတွေးနေတုန်းလာ ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုက ကိုယ်နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ် ကိုယ်ပျော်ချင် ပျော်အောင်နေတတ်ဖို့ပဲလိုတာ ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါ ဘယ်သူ့ကိုမှ မတနဲ့ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်မှပဲ ကိုယ့်ပန်းတိုင်ကိုယ်ရောက်တာပါ အရာရာမှာ ကိုယ်ပဲ လိုပါတယ် ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာ ပိုပြီး ချစ်ပါ
အတ္တကြီးပါလို့ ​ဆိုတာလိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲ တခြားတစ်ယောက်အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မနာကျင်စေချင်တာပါ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် အအိပ်ပျက် အစားပျက်တာတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နှိပ်စက်ရာကျတယ်လေ ကိုယ့်ထက် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပိုချစ်လိုက်တဲ့အခါ အဲ့ဒီလူကြောင့်ပဲ ကိုယ့်မှာ နာကျင်ရပါတယ် ငါ့အတွက် ငါ့အတွက် ကြီးပဲဆိုတာမျိုးက အတ္တကြီးတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်တာ မဟုတ်ဘူး
တကယ်လို့ ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်သာ အမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးတတ်ရင် ကိုယ့်မိသားစု ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင် အရာအားလုံးကို ချစ်တတ်လာလိမ့်မယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထိခိုက်အောင် မလုပ်တော့သလို ကိုယ့်မိသားစုကိုလဲ မထိခိုက်စေချင်ကြဘူးလေ
လောကမှာလေ . . . .ကိုယ့်လောက် ကိုယ့်အပေါ်နားလည်အနိုင်ဆုံးဆိုလို့ ဒီကမ္ဘာမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပဲရှိတယ် ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာ ချစ်ပါ ။
၀ဋျဆိုတာ လညျတတျပါတယျ ။
ဒီလို အနီးမှုနျတဲ့လူတှကေ ဒီလောကမှာ အမြားကွီးရှိပါတယျ